Tinogona ikozvino kuona YouTube VR mavhidhiyo pane iyo iPhone | IPhone nhau
Imwe yemisika inotevera inonyanya kukosha ndeye Virtual Reality (VR nechidimbu chayo muChirungu). Samsung neMicrosoft makambani maviri ari kushanda pane Virtual Reality uye vaongorori vazhinji vanoti Apple ichatanga kushanda pachayo yeVR Hardware uye / kana software munguva yepakati nepakati. Takamirira, Google yatora nhanho kumberi ichivandudza mashandisiro ayo YouTube official kubvumira vashandisi veIOS kuti vafarire mavhidhiyo ari Virtual Reality.
Sezvatinoverenga mune rondedzero yeshanduko yakaverengerwa muYouTube 11.18, zvave zvakadaro akawedzera kutsigirwa kweGoogle Cardboard uye vanovimbisa kuti ikozvino unogona kuona chero vhidhiyo muVR. Kune rimwe divi, uye izvi hazvisisina chekuita neicho chaicho asi neshanduro nyowani yeYouTube, kumaka zvisirizvo kwemavhidhiyo anoonekwa mune yekunyorera feed kwagadziriswa, izvo zvakaita kuti chikumbiro chionekwe se «Kuonekwa» Vhidhiyo iyo isu tanga takamirira.
YouTube inotibvumidza kuona VR mavhidhiyo pane iyo iPhone
Kuti tione mavhidhiyo muVR tichada kuve neGoogle Cardboard yambotaurwa, magirazi emakadhibhodhi aunayo mumufananidzo wapfuura. Chaizvoizvo, iyo "mashiripiti" yechokwadi chaiyo iri mumavhidhiyo. Chigadzirwa chavanotambirwa chinofanirwa kunge chiine chakakosha uye mune aya mavhidhiyo eVR tinogona kuti zvakwana izvozvo ziso rimwe nerimwe rinoona mufananidzo wakasiyana, vachizviparadzanisa nevamwe nyika. Mufananidzo unoguma rudzi rwekunyepedzera kwemeso, izvo zvinogona kutiita kuti titarise vhidhiyo mumatatu matatu, semuenzaniso.
Kubva ikozvino zvichienda mberi, patinoona chero vhidhiyo kubva kuYouTube application uye tora pane bhatani rezvisarudzo, tichaona mufananidzo senge yapfuura. Zvine musoro, kana tichida kushandisa Google Cardboard isu tichafanirwa kubata chiratidzo chayo, icho chinozoshandura mufananidzo uye ucharatidzwa seunotevera:
Sezvauri kuona, iwo mufananidzo wakagadzirira kuti uonekwe nemhedzisiro uye unozofamba apo isu tichifambisa chishandiso. Ehezve, sezvandambotaura, mashiripiti anofanira kunge ari muvhidhiyo, saka ndinofunga hatizoone chero chakakosha muvhidhiyo kana isina kugadzirirwa VR usati waisa kuYouTube.
Kana iwe uchifarira kuona izvi uye zvimwe zvakafanana software muVR, unogona kutenga iyo yaunoda kubva pawebhusaiti ye Google kabhodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iye zvino tinogona kutarisa mavhidhiyo eVR kubva kuYouTube pane iyo iPhone
ruregerero kusaziva kwangu, mubvunzo unogara uchionekwa wakapetwa kana uchipfeka magirazi angu? Haungave mumwe mufananidzo angave ari nani, aisazoona zvakapetwa zvinganetsa?